खास माधवतिर कति खुल्नुपर्ने ? « Jana Aastha News Online
खास माधवतिर कति खुल्नुपर्ने ?
प्रकाशित मिति : ८ श्रावण २०७८, शुक्रबार १७:००
राजनीतिमा गैरराजनीतिक मानिसहरुलाई बढावा दिइँदा र तिनका महत्वाकांक्षा चुलिँदा केसम्म हुनसक्छ भन्ने कुरा यतिबेला केपी ओलीले भोगेरै बुझ्नुभएको हुनुपर्छ ।
जस्तो– शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत नदिने एमाले निर्णयविपरीत ओलीपक्षका केही सांसद फ्लोर क्रस गर्न पुगे । त्यसरी जानेमध्येका हुन्, प्रेमबहादुर आले, धनबहादुर बुढा, कृष्णबहादुर (किसान) श्रेष्ठ । यी तीनैजना व्यवसायिक पृष्ठभूमिबाट आएका हुन् । डोटीका आले निर्माण व्यवसायी र काठसम्बन्धी व्यापार गर्थे । अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलनबाट राजनीतिमा छिरेका हुन् ।
डोल्पाका धनबहादुर बुढा अहिले पनि ‘क’ श्रेणीको निर्माण व्यवसायी हुन् । उनले राप्रपा छाडेर ०७० मा एमाले प्रवेश गरी त्यही साल टिकट पाएर चुनाव जितेका थिए । उनी त्यसरी रातारात एमाले भएर टिकट पाएपछि पुराना एमाले अंगद बूढा कांग्रेस प्रवेश गरेका थिए । कृष्णबहादुर (किसान) अहिले पनि विभिन्न व्यापार व्यवसायमा संलग्न छन् । उनले तनहुँबाट कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई हराएका थिए । यीमध्ये धनबहादुर र किसान एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम निकट मानिन्छन् ।
मतको हिसाबले अहिले एमालेमा माधव नेपालतिर ३७ जना सांसदको हिसाब गर्न थालिएको छ । बीचमा ओलीतिर लागेर अहिले माधवतिर गएका दाङका हिराचन्द्र केसी र मुगुका गोपाल बम पहिला पनि माधव पक्षकै हुन् । पहिले पनि ओलीतिरै खुलेका शहीद नेत्रलाल अभागी पत्नी विष्णु केसी र जीवराज आश्रित पत्नी माया ज्ञवाली पनि माधवतिरकै हुन् । पहिलो संविधानसभामा आउँदा प्रेम आले पनि माधव पक्षकै थिए ।
तर, त्यसबेला मन्त्री बनाइन लाग्दा भीम रावलले रोकेको भन्दै उनी रावलविरोधी हुनलाई ओलीपक्षमा लागेको बताइन्छ